Home Pregnancy Test/UCG Strip - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
Home Pregnancy Test/UCG Strip
ဆီးစဈတံလေးကို ကိုယျဝနျရှိ၊မရှိ စဈဆေးရာမှာသုံးမှနျး ယောငျးယောငျးတို့အားလုံးသိကွပါတယျ။
တိကမြှနျကနျတဲ့ ယောငျးယောငျးတို့ သခြောထပျသိထားသငျ့တယျ့ ဆီးစဈတံလေးရဲ့အကွောငျးလေးတဈခြို့ ပွောပွပေးမယျနျော။
မှနျကနျတဲ့အဖွရေရှိဖို့ ဆီးစဈတံလေးကို ဘယျလိုစနဈတကသြုံးရ မယျဆိုတာလေး အရငျဆုံးပွောပွပါရစေ။
အရငျဆုံး ဆီးသှားပွီး ဆီးကိုခွောကျသှသေ့နျ့စငျတဲ့ခှကျလေး တဈခုနဲ့ခံထားပါ။
ပွီးရငျ ဆီးစဈတံရဲ့အပျေါဖကျအစှနျးကိုကိုငျပွီး ကနျြတဈဖကျအစှနျးကို ဆီးထဲသို့နှဈရမညျ့ အမှတျအသားပွထားတဲ့နရောအထိနှဈပါ။
သုံးစက်ကနျု့ကွာလြှငျဆီးထဲကပွနျထုတျပွီး တဈနရောမှာတငျထားပါ။ ငါးမိနဈကွာလြှငျအဖွဖေတျပါ။
ရာသီလာရမယျ့ရကျကြျောလို့ ရာသီမပျေါဘူးဆိုရငျ ဆီးစဈကွညျ့ပါ။ ၂ကွောငျးပျေါရငျ ကိုယျဝနျရှိနပွေီလို့ ယူဆနိုငျပါတယျ။ဒါဆိုရငျတော့ ယောငျးယောငျးတို့အနနေဲ့ ကိုယျဝနျအပျဖို့လိုလာပွီမို့ နီးစပျရာ ဆေးရုံ ဆေးခနျးမှာ အမွနျကိုယျဝနျသှားအပျလိုကျပါတော့။ ၁ကွောငျးပဲပျေါရငျရော….၁ကွောငျးပဲပျေါရငျတော့ ကိုယျဝနျမရှိဘူးလို့ဆိုလိုပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ စိတျဓာတျမကသြှားပါနဲ့ဦး….နောကျထပျ တဈပတျလောကျစောငျ့ကွညျ့လိုကျပါဦး။နောကျတဈပတျကွာတဲ့ထိ ရာသီမပျေါသေးဘူးဆိုရငျ ဆီးစဈတံလေးနဲ့ထပျစဈကွညျ့လိုကျပါ။ ထပျစဈလို့… ၂ကွောငျးပျေါရငျ ကိုယျဝနျရှိနပေါပွီ။ ထပျစဈလို့…. ၁ကွောငျးပဲပျေါတယျဆိုရငျတော့ ကိုယျဝနျရှိနိုငျခအြေ တျောနညျးသှားပါပွီ။ဒါဆို ကိုယျဝနျရှိနတောလညျး မဟုတျဘဲ ရာသီလညျးမလာသေးဘူးဆိုရင ရာသီမလာတယျ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတာသိဖို့လိုလာပါပွီ။နီးစပျရာဆေးရုံး ဆေးခနိးကို အမွနျဆုံးသှရောကျပွသပွီး ရာသီမလာရတဲ့ အကွောငျးရငျးကို ရှာဖှစေဈဆေးပွီး လိုအပျရငျ ကုသမှုခံယူသငျ့ပါတယျ ယောငျးယောငျးတို့ရေ
၂ကွောငျးတော့ပျေါတယျ၊ဒါပမေယျ့ တဈကွောငျးက အရောငျလေးကမှိနျနတေယျ။
၂ကွောငျးပျေါတယျဆိုရငျကို အရောငျမှိနျနရေငျတောငျမှ ကိုယျဝနျရှိနတေယျလို့ပွောလိျု့ရပါတယျ။
ဆီးစဈတံလေးရဲ့အဖွကေ ဘယျနခါစဈစဈ တဈကွောငျးပဲပျေါတယျ၊ ဒါပမေယျ့ ရာသီလညျးမလာသေးဘူး၊မိမိကိုယျကိုယျလညျး ကိုယျဝနျရှိနတေယျလို့ ခံစားနရေရငျရော? အဲ့လိုဆိုရငျတော့ နီးစပျရာဆေးရုံ ဆေးခနျးမှာ ဆရာဝနျနဲ့သှားရောကျပွသစဈဆေးတာ ယောငျးယောငျးတို့ပိုသခြောပါတယျ။
ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ အခြို့သော ဆေးတှေ(ဥပမာ – စိတျငွိမျဆေး၊ အိပျဆေး၊ဆီးဆေး၊အတကျကဆြေး၊မြိုးမအောငျလြှငျသုံးသောဆေး စသညျ) သောကျနတေယျဆိုရငျ ဆီးစဈတံလေးရဲ့အဖွမှေားနိုငျလို့ပါ။
ရှိပါတယျ။သကျတမျးကုနျဆုံးရကျကြျောလှနျနတေဲ့ ဆီးစဈတံက မှနျကနျတဲ့အဖွပေေးနိုငျမှာမဟုတျလို့ ဆီးစဈတံဝယျရငျ သကျတမျးကုနျဆုံးရကျလေး သခြောကွညျ့ပွီးမှဝယျပါလို့ မှာလိုကျပါရစေ ယောငျးယောငျးတို့ရေ…..
ဆီးစစ်တံလေးကို ကိုယ်ဝန်ရှိ၊မရှိ စစ်ဆေးရာမှာသုံးမှန်း ယောင်းယောင်းတို့အားလုံးသိကြပါတယ်။
တိကျမှန်ကန်တဲ့ ယောင်းယောင်းတို့ သေချာထပ်သိထားသင့်တယ့် ဆီးစစ်တံလေးရဲ့အကြောင်းလေးတစ်ချို့ ပြောပြပေးမယ်နော်။
မှန်ကန်တဲ့အဖြေရရှိဖို့ ဆီးစစ်တံလေးကို ဘယ်လိုစနစ်တကျသုံးရ မယ်ဆိုတာလေး အရင်ဆုံးပြောပြပါရစေ။
အရင်ဆုံး ဆီးသွားပြီး ဆီးကိုခြောက်သွေ့သန့်စင်တဲ့ခွက်လေး တစ်ခုနဲ့ခံထားပါ။
ပြီးရင် ဆီးစစ်တံရဲ့အပေါ်ဖက်အစွန်းကိုကိုင်ပြီး ကျန်တစ်ဖက်အစွန်းကို ဆီးထဲသို့နှစ်ရမည့် အမှတ်အသားပြထားတဲ့နေရာအထိနှစ်ပါ။
သုံးစက္ကန့်ုကြာလျှင်ဆီးထဲကပြန်ထုတ်ပြီး တစ်နေရာမှာတင်ထားပါ။ ငါးမိနစ်ကြာလျှင်အဖြေဖတ်ပါ။
ရာသီလာရမယ့်ရက်ကျော်လို့ ရာသီမပေါ်ဘူးဆိုရင် ဆီးစစ်ကြည့်ပါ။ ၂ကြောင်းပေါ်ရင် ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီလို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ ယောင်းယောင်းတို့အနေနဲ့ ကိုယ်ဝန်အပ်ဖို့လိုလာပြီမို့ နီးစပ်ရာ ဆေးရုံ ဆေးခန်းမှာ အမြန်ကိုယ်ဝန်သွားအပ်လိုက်ပါတော့။ ၁ကြောင်းပဲပေါ်ရင်ရော….၁ကြောင်းပဲပေါ်ရင်တော့ ကိုယ်ဝန်မရှိဘူးလို့ဆိုလိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်ဓာတ်မကျသွားပါနဲ့ဦး….နောက်ထပ် တစ်ပတ်လောက်စောင့်ကြည့်လိုက်ပါဦး။နောက်တစ်ပတ်ကြာတဲ့ထိ ရာသီမပေါ်သေးဘူးဆိုရင် ဆီးစစ်တံလေးနဲ့ထပ်စစ်ကြည့်လိုက်ပါ။ ထပ်စစ်လို့်… ၂ကြောင်းပေါ်ရင် ကိုယ်ဝန်ရှိနေပါပြီ။ ထပ်စစ်လို့…. ၁ကြောင်းပဲပေါ်တယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်ဝန်ရှိနိုင်ချေအ တော်နည်းသွားပါပြီ။ဒါဆို ကိုယ်ဝန်ရှိနေတာလည်း မဟုတ်ဘဲ ရာသီလည်းမလာသေးဘူးဆိုရင ရာသီမလာတယ် ဘာကြောင့်လဲဆိုတာသိဖို့လိုလာပါပြီ။နီးစပ်ရာဆေးရုံး ဆေးခနိးကို အမြန်ဆုံးသွရောက်ပြသပြီး ရာသီမလာရတဲ့ အကြောင်းရင်းကို ရှာဖွေစစ်ဆေးပြီး လိုအပ်ရင် ကုသမှုခံယူသင့်ပါတယ် ယောင်းယောင်းတို့ရေ
၂ကြောင်းတော့ပေါ်တယ်၊ဒါပေမယ့် တစ်ကြောင်းက အရောင်လေးကမှိန်နေတယ်။
၂ကြောင်းပေါ်တယ်ဆိုရင်ကို အရောင်မှိန်နေရင်တောင်မှ ကိုယ်ဝန်ရှိနေတယ်လို့ပြောလို့်ရပါတယ်။
ဆီးစစ်တံလေးရဲ့အဖြေက ဘယ်နခါစစ်စစ် တစ်ကြောင်းပဲပေါ်တယ်၊ ဒါပေမယ့် ရာသီလည်းမလာသေးဘူး၊မိမိကိုယ်ကိုယ်လည်း ကိုယ်ဝန်ရှိနေတယ်လို့ ခံစားနေရရင်ရော? အဲ့လိုဆိုရင်တော့ နီးစပ်ရာဆေးရုံ ဆေးခန်းမှာ ဆရာဝန်နဲ့သွားရောက်ပြသစစ်ဆေးတာ ယောင်းယောင်းတို့ပိုသေချာပါတယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အချို့သော ဆေးတွေ(ဥပမာ – စိတ်ငြိမ်ဆေး၊ အိပ်ဆေး၊ဆီးဆေး၊အတက်ကျဆေး၊မျိုးမအောင်လျှင်သုံးသောဆေး စသည်) သောက်နေတယ်ဆိုရင် ဆီးစစ်တံလေးရဲ့အဖြေမှားနိုင်လို့ပါ။
ရှိပါတယ်။သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်ကျော်လွန်နေတဲ့ ဆီးစစ်တံက မှန်ကန်တဲ့အဖြေပေးနိုင်မှာမဟုတ်လို့ ဆီးစစ်တံဝယ်ရင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်လေး သေချာကြည့်ပြီးမှဝယ်ပါလို့ မှာလိုက်ပါရစေ ယောင်းယောင်းတို့ရေ…..
Are Drip Lines Really Necessary for Healthy People